ဆရာကြီး ဦးတင်မောင်ညိုကို အောက်မေ့သတိရ ချီးမွမ်းပွဲ | Rev.U Min Lwin
ဆရာကြီး ဦးတင်မောင်ညိုကို အောက်မေ့သတိရ ချီးမွမ်းပွဲ
Posted by ဦးမင်းလွင် on 11/06/2013
Posted in: တရားဟောချက်.	Tagged: အောက်မေ့ဘွယ်.	1 Comment
ယခုလ (၅) ရက်နေ့တွင် ဘုန်းတော်ဝင်စားသွားခဲ့သော ဆရာကြီး ဦးတင်မောင်ညို (ဆရာကြီး ဦးတင်မောင်ထွန်း၏ ညီရင်း) ၏ အောက်မေ့ ချီးမွမ်းခြင်း အခမ်းအနားကို အမှတ် (၂) ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းရှိ ညီအကိုများ အသင်းတော် အဆောက်အဦးတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထိုအခမ်းအနားတွင် အသင်းတော် အသီးသီးမှ အမှုတော်ဆောင်များ၊ CEF မှ အမှုတော်ဆောင်များ၊ ခရစ်တော်၏ သက်သေခံလုပ်ငန်းမှ အမှုတော် ဆောင်များနှင့် ဦးတင်မောင်ညိုကို လေးစားချစ်ခင် မြတ်နိုးကြသော ယုံကြည်သူ အယောက် (၄၀၀) ခန့် တတ်ရောက်ခဲ့ ကြပါ သည်။
အစီအစဉ်မှူးအဖြစ် ဆရာ ဦးတင်မောင်ကြည် (ဆရာကြီး ဦးတင်မောင်ညို၏ သား) ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် CEF ရုံးမှ ဆရာမများ၊ ဆရာကြီး၏ တူ/တူမများ၊ မြေးများနှင့် အသင်းတော်မှ လူငယ်များက အောက်မေ့ဘွယ် ချီးမွမ်းခြင်း သီချင်းများဖြင့် ဂုဏ်ပြု သီဆိုကာ အောက်မေ့ခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။
ဆရာကြီးသည် CEF ရုံးတွင် နေထိုင်းသောကြောင့် CEF ရုံးမှ ဆရာမများကို နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် သွန်သင်ခြင်း၊ ဝေငှခြင်းတို့ဖြင့် ဆုံးမခဲ့ သည် အလျောက် ဆရာမများမှလည်း သတိယ အောက်မေ့သည့်အနေဖြင့် ဆရာကြီးရှိစဉ်က သူတို့အပေါ်တွင် ဆရာပီသစွာ အသက်ရှင် ခဲ့ပုံကို ပြောဆိုကာ ဂုဏ်ပြု ချီးမွမ်းခဲ့ပါသ်။
ထို့နောက် ဆရာကြီး ဦးတင်မောင်ညို၏ သမီးက ဖခင်၏ အထုပ္ပတိကို ဖတ်ပြ၍ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဆရာကြီး ဦးတင်မောင်ထွန်းမှ နှုတ်ခပတ်တော် ဝေငှကာ ဟောပြောခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ဟောပြောရာတွင်လည်း ညီဖြစ်သူ ငယ်စဉ်က ဆိုးမိုက်ခဲ့ပုံများ၊ ခရစ်တော် ရရှိသွားပြီးနောက် အသက်တာ ပြောင်းလဲသွားပုံများ၊ အမှုတော်အတွက် ဆက်ကပ် အသက်ရှင်ပုံများကို ဝေငှခဲ့ပါသည်။
အောက်မေ့သတိရ ချီးမွမ်းခြင်း အစီအစဉ်မှ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများကို နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်များမှ ယုံကြည်သူများ၊ မလာမရောက်နိုင်သော ညီအကို မောင်နှမများအတွက် ကြည့်ရှုနိုင်ရန် တင်ပေးလိုက်ပါသည်။
← ဖခင်များနေ့ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်း
ဖခင်များနေ့မှာ ဖခင်များကို ဂုဏ်ပြုပါ။ →
One comment on “ဆရာကြီး ဦးတင်မောင်ညိုကို အောက်မေ့သတိရ ချီးမွမ်းပွဲ”
melody khaw on 11/06/2013 at 10:19 PM said:
Thank you for sharing about memorial service of sayagyi U Tin Mg Nyo. He is with the Lord now.
We are going to this place one day.